Hevitra MPANOHARIANA | 151
2007-05-14 @ 17:04 in Andavanandro
Niara-nigadona tao amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena ny mpianatra tavaratra. Tonga tamin’ny fiara fitaterana ry zareo. 487 no isan-dry zareo nifampiandry teo fa hihaona amin’ny « ray aman-dreny » araka ny nifanarahana. Ny teny hoe tavaratra dia efa milaza zavatra hafahafa ihany saingy mbola tsy nisy sahy nanameloka hatramin’izao. Efa fisainana fampisarahana manko no ao ambadika na dia fivondronam-be aza no fijery azy amboalohany. Impiry impiry manko ny resaka fifandirana any amin’ny sekoly ambony tany aloha tany no nisy resaka hoe tavaratra sy tatsimo fa notsinotsinoavina hatrany aloha izany. Fifampiarovana manoloana ny hafa no tena antony, ny hafa izay Malagasy ihany fa tsy vahiny tsy akory.
Resaka samy varimbarina noho ny toaka no nihavian’ity raharaha ity voalohany. Dia nisy niady tamin’izany ka dimy lahy no namely iraika lahy. Naratra be ilay iraika lahy ary dia niantso namana hamonjy azy. Tsy namana fe namana fa ireo iray fikambanana aminy izay iray fihaviana aminy ihany koa. Ny zanaky ny atsimo atsinanana sy ny kintan’ny atsimo no nitaky tamin’ny zanak’avaratra ireo nidaroka ny iray fihaviana aminy. Milaza ho tsy mahalala ny tavaratra. Nanao takalon’aina (angaha fantatra intsony koa izay isa marina na folo na dimy e !) avy amin’ireo zanak’avaratra ny fivondronamben’ny tatsimo fa tsy maintsy fantatry ry zareo izay nidaroka ny namany. Tsy maintsy niditra an-tsehatra ny ray aman-dreny. Ny fitantarana no nilazana fa niaiky ireo avy amin’ny tavaratra fa nanam-pahadisoana ny zanany ka nanolotra omby dimy ho fampihavanana eo amin’ny roa tonta. Andro zoma maraina no nanaovana ny joro izay ambara amin’ny fomba mihaja hoe fomba malagasy.
Manomboka tamin’io andro io no nifamahofaho tanteraka ny raharaha. Tsy fantatra intsony izay tsaho sy marina. Tsy maintsy nisy ny nandainga. Resaka roa samihafa no ambarako etoana : ny voalohany dia ny filazan’ireo mpianatra nankeny Tsimbazaza izay nalaina sary sy feo hitan’ny mpijery fa naheno hoe ry zareo fa mbola nanafika ihany ny andaniny ka namaky ny fitaovana tratran-dry zareo tao an-trano toy ny vilia, vilany, ny tele sy ny lecteur. Te-hiaro ny ain-dry zareo ry zareo dia naleony nody. Ny gazety kosa dia sady nanambara ny fahagagan’ny olona any Fianarantsoa, ny amin’ny nahatonga azy ireo nody tampotampoka no nandre hoe nisy nanely tsaho fa maty hoe ilay noratrain-dry zalahy dimy nidaroka iry. Dia nifamotoana teny Tsimbazaza iny ry zareo. Ry zareo mbola nanda hatramin’ny farany fa tsy nisy nidaroka izany ny bandy avy aminy (fa niezaka nanao teny avy any avaratra ireo nidaroka hoy ilay niantso an-telefonina izay). Na ahoana nefa na ahoana efa nalaza eo anatrehan’ny hafa ihany koa (ialana tsiny indrindra fa maharary ity) ny rehareha sy ny hetraketraky ny avy any avaratra sasantsasany (tsy manao safobemantsina mihitsy aho fa aleo aza teteniko hoe vitsy an’isa izy ireo).
Ny mahavariana dia izao : Nanaiky ny mpitondra fanjakana fa hiantohana ny sara andehanan-dry zareo mody sy ny hiverenan-dry zareo mianatra indray rehefa milamina ny toe-draharaha. Dia efa tena mamono afo tokoa angaha no nataon’ny mpitondra fanjakana no dia nanaiky izay tolo-kevitra izay ry zareo. Ny hafa manko raha tratran’ny fandroahana na dia ankolaka aza samy miantoka ny tenany manao izay hialana eo amin’ny loza fa ry zareo kosa voatambitamby miaraka amin’ny fiara tsara tarehin’ny minisiteran’ny fampianarana. Mody toy ny vedety fa tsy mody toy ny nitsoaka. Ny ratsiratsy vava aza moa nanao hoe tsy mahazaka ry zareo ny atao hoe diso tamin’ny raharaha tamin’ny herinandro teo ka aleony mody sady manararaotra ity fitondrana efa manahy fatratra ny amin’ny resaka 13 may ity. Tsy izany tokoa manko fa nofoanana ilay fandaharana manokana momba ny 13 may 1972 saiky natao omaly alahady noho ny antony tsy fantatra (tsy fantatr’iza ?).
Manaraka izany ihany koa, efa nitondra tsy fidiny ireo fiara fitaterana avy any Fianarantsoa matoa nahatonga ireo mpianatra ireo hatrany amin’ny lapan’ny antenimiera eny Tsimbazaza amin’ny andro atoandro. Amin’ny fotoana mahazatra dia tsy mahazo mitondra mpandeha eny ny fiara ary tsy avelan’ny polisy mihitsy, voararan’ny lalàna rahateo izany. Mety noho ry zareo nanao tohivakana angaha no mety ho nandeferan’ny mpitandro ny filaminana tamin’ity indray mitoraka ity. Na izany na tsy izany dia ity raharaha ity no maneho amin’izay mahiratra fa tsy tena mifankahazo ny samy Malagasy fa miara-monina fotsiny noho ny toerana iraisana dia i Madagasikara izany. Zavatra maro moa no tiana ambara saingy izay angaha no sahaza ny androany.
«Mialoha 1 2 3 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 155 156 157 Manaraka»